TERRY BEGONIA WELIGIIS UBAX - DARYEELKA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Terry begonia - ubax qurux badan oo xasaasi ah
Dhirta gudaha Terry begonia wuxuu jecel yahay dareen gaar ah iyo caan ah. Qaar ka mid ah beeralayda ubaxyada qaarkood waxay yiraahdaan waxaa la dhisay nooc jilicsan oo cajaa'ib leh. Aan la yaabin. Waa ku filan in la arko ubaxyada quruxda badan hal mar si ay ugu dhacdo jacayl mar iyo dhammaanba!
Warshad ah caleemaha Begonia. Waa geed yar, ornamental, geedo cagaaran leh caleemo dhoobo badan. Ubax waa weyn, ee midabada kala duwan, qaabeeya sida-aadanku yar yahay. Maaddaama ay tahay magac aan caadi ahayn Terry soo jiido on ubaxyo ubaxtaas oo siinaysa jacayl qaas ah iyo muujin.
Dabeecadda, begonia waa ku baahsan yahay dhulalka Afrika, Aasiya, iyo Ameerika. Dhaqanka gudaha, waxa uu bilaabay inuu koro qarnigii 17aad.
Tan iyo markaas ka dib, noocyo kala duwan oo kala duwan iyo noocyo ayaa la helay, kala duwan ee cabbirka, midabka iyo qaar ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee daryeelka.
Dukaamo gaar ah, "Begonia Terry Mix" waa mid aad u badan. Dad badan oo naqshadeeyayaasha ah waxay siinayaan doorbidiisa. Waxay qurxin doonaan wax kasta oo ubax leh iyada oo midabada kala duwan ee dhalaalaya.
Terry begonia weligiis ubax waxaa badanaa ku wareersan yahay abid abid-ubax ah, taas oo ka maqan xuduudda xayawaanka dabiiciga ah.
Gacalinta daryeelka Begonia ayaa guriga isku daraysa
Horumarinta curonia ma ahan mid adag, inkastoo nidaamkani uu u baahan yahay feejignaan, daryeel iyo masuuliyad.
In dhaqanka guriga koray digriiga ama abuurka.
Digriiga waxaa la diyaariyaa xilliga dayrta (kahor bilawga hawada qabow). Waxay ka soo baxaan dhulka, la nadiifiyaa, oo afkana laga saaro. Ku kaydi meel qabow (+8 +11) in tuubooyin leh peat ama caano. Beeray laga soo bilaabo bartamihii Febraayo ilaa May.
Seeds lagu beeray xilliga jiilaalka ee isku darka diyaarinta ee dhul caleen leh oo lagu daro peat iyo ciid. Sida ugu dhib badan, waqti badan ayay qaadataa.
Haddii aad u socotid ubaxyo ku-beddelashada loggia furan, beerta xilliga qaboobaha ama xagaaga xagaaga, tan waa in la qabtaa bilowga ama bartamaha bisha Maajo. Waxaa muhiim ah in waqtigan barafku waa in si buuxda u lumay goobta, qorraxdu way dhammaatay habeenkii, iyo maalintii oo dhan dhulka ayaa si fiican u kulul qorraxda.
Waxaa lagugula talin karaa inaad doorbiddo kontaynarro ka sameysma qalabka jawiga deegaanka ah - dhoobada ama dhoobada dhoobada, kuwaas oo haysta derbiyada dusha sare leh oo si fiican u dabooli kara oksijiinka. Waxaa lagu kori karaa marinno alwaax ah oo biyo fiican leh. Dooro digir qoto dheer (10-14 cm).
Caaggu ma taagnaan karo. Tani waa mid raqiis ah, cufan, "ma neefsan" alaab.
Iftiin, ciidda jilicsan ee hodan ku ah macdanta ayaa ku haboon. Oksijiin waa in tago xididadaHa dhigin qoyaan.
Waxaad ka iibsan kartaa dhirta diyaarka ah ee diyaarka u ah dhirta dhirta. Ku dar boodh ama sanduuq bata leh si aad u fiican oo biyo u samee.
Waxaad naftaada ka karsan kartaa ciidda aqalka dhirta lagu koriyo oo loogu talagalay dhirta gudaha ah, ciidda la qalajiyey iyo peat.
Qeybta hoose ee dheriga waa in ay ka dhigtaa meel daadsan. Noocyada qaaxadu waxay si gaar ah ugu nugul yihiin gulf.
Guga iyo xagaaga, biyaha si joogto ah iyo si ballaaran ah (2 jeer toddobaadkii). Xilliga jiilaalka - wax ka yar.
Ka daawo qoyaanka ciidda. Inta u dhaxeysa waraabka, lakabka sare ee dhulka waa inuu si wanaagsan u qalajiyaa. Nidaamka firfircoonida wuxuu u horseedi karaa inuu lakabiyo xididada.
U isticmaal biyo keliya heerkulka qolka.
Begonia Terry jecel yahay iftiin fiican, iftiin adag. Laakiin, uma dulqaadan karto saamaynta qorraxda tooska ah. Caleemaheeda waa mid aad u xasaasi u ah kuleylka iyo gubashada.
Xilliga qaboobaha, samee xaaladaha nalalka iftiinka.
Haddii ubaxu ku yaala daaqadaha, marmarna u jeedi dhinaca kale ee qorraxda. Waxay kor u qaaddaa kobaca labiska iyo ubax.
Xilliga qaboobaha, haddii loo baahdo, isticmaal nalal iftiin macquul ah.
Qolku waa inuu dhexdhexaad ahaado, Heerkulka diirran (19-23 digrii). Begonia ma jecla qolal kulul, hawo qallalan leh hawo qalalan.
Inta badan hawada aqalka ah. Isla mar ahaantaana ku hayn dhirta ka fog qaboojinta, dabaysha qabow, dhibicda heerkulka.
Xilliga xagaaga ee kuleylaha waxay faa'iido u yeelan doontaa in la bilaabo dhalashada hawada cusub.
Xilliga jiilaalka, heerkulka qolka waa inaan ka hoos dhicin 15 darajo.
Qoyaanka waa in la kordhiyaa. Isla mar ahaantaana, laguma talin in lagu buufiyo ubaxa, sidaas darteed caleemaha brown ma muuqan caleemaha. Qaado naadiyaha daboolay, ku buufin hawada hareeraha ubaxa ama meel u dhow weel biyo ah.
Waa waxtar badan in la qabto wax ka badan hal mar bishii. Bacriminta gaarka ah waxay ku habboon yihiin dharka ugu sareeya.
Begonia waxay u baahan tahay manjooyin joogto ah, maadaama ay si dhakhso ah u koraan, oo afkuna uu bilaabo inuu si deg deg ah u fidiyo. Nidaamka manjooyin ayaa faa'iido leh si loo hagaajiyo ubax, sameynta taajka ah ee warshad dhalinyaro ah, dibudhisid iyo ilaalinta muuqaal qurxin ah.
By bilawga bilaabashada ugu horeysay marka afkoda u koraan ilaa 7-8 cm. Goosashada waxay u baahan tahay in la siiyo qaab. Ka dib markii gooyo, waraabinta si ku meel gaar ah ayaa loo dhimay.
Marka caleemaha dhinaca gaadho 10-12 cm, gooyaa dushooda. Tani waxay kaa caawineysaa kicinta kelyaha dambe.
Mustaqbalka, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso muuqaalka muuqaalka ubaxa. Ka saar saqafyada la qalajiyey, caleemaha iyo caleemaha.
Gooyo waxaa lagu sameeyaa oo kaliya mindi fiiqan. Maqasyada ama baastoolada lama isticmaali karo. Waa faa'iido leh in la gooyo qaybaha la jaray dhuxul la jajabiyey si loo dedejiyo habka bogsashada.
Faafin by abuur iyo jarida.
Qaadashada dabayaaqadii Janaayo ama horraanta Febraayo.
Xulo weel ku habboon. Biyaha waxaa lagu shubay hoose iyo ciidda ka kooban dhulka caleen, ciid, peat iyo qoyaan.
Seeds waxaa lagu beeray dusha sare, si khafiif ah u rusheeyaa dhulka.
Waxaa lagu beeray xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Daboolka sare ee weelka dhalada ama filimka. Fur hal mar maalintii si ay geedo u neefsadaan hawada oo qoyaan markii loo baahdo. Waxaa ku jira heerkul ah 22-25 digrii.
On top of dhibcood muraayadaha ayaa si joogto ah foomka. Waxay u baahan yihiin inay tirtiraan maro qalalan.
Caleemaha ugu horreeya waxay u muuqdaan 2 toddobaad.
Isticmaal mindi, gooyso caleen caafimaad leh, caleen xoog leh oo ka timaadda asliga ah kuna rid weel weel leh substrate qoyan (dhoobo dhoobo, perlit ama dhogorta).
Daboolka sare ee leh dhalada galaas ama polyetylen. Waxaad ka dhigi kartaa godad filimka si marka hawadu u dhacdo.
2 toddobaad kadib, xididdada ayaa soo baxaya. Laba toddobaad ka dib, polietylene ayaa laga saaraa, iyo biqilaha xididada yar ayaa lagu beeray.
Goob joog ah
Begonia waxaa lagu kori karaa geedka sanadlaha ah, iyo dilka ah.
Haddii aad ubaxdo ubax xagaaga xagaaga ama loggia furan, dhirta boqoradda waxaa lagu beddelaa dheriyo waxaana loo wareejiyaa guriga ka hor inta bilawga ah ee baraf ugu horeysay. In aagga iftiin-iftiin, curonia waxay sii wadi kartaa in ay Bloom ilaa guga, ka dibna waxaa mar kale lagu beeray goobta.
Haddii aad ku dhalatay ubaxa sida ubax gudaha ah, waxaad u baahan tahay inaad si haboon u ilaaliso xannaanada inta lagu jiro xilliga nasashada.
Warshadaa waxaa badanaa la googooyaa sanadkiiba mar guga hore. Si tan loo sameeyo, qaado qiyaasta cabbirka weyn.
Noocyada daryeelka xilliga qaboobaha
Waa waqti aad nasato. Goobaha iyo caleemaha gooyaa. Dib u riix dheriga meel qallalan leh heerkul ah 15-17 digrii. Waraabinta waa la dhimayaa ilaa 3-4 jeer bishiiba. Ha bacrin. Bishii Maarso, ubaxa waxaa lagu beeray ciid cusub, bilaabaan inay si aad ah u cabbaan oo u sameeyaan quudin dheeraad ah.
Waxay ku dhacdaa wakhti diiran. U fiirso daryeel habboon jiilaalka. Guga, bixiyaan waraabin badan, quudiyaan geedka si ay u bilaabaan ubax badan.
Terry begonia wuxuu u nugul yahay inuu jabiyo talooyinka ku saabsan daryeelka iyo degitaanka. Waxaa laga yaabaa in ay ku dhacdo cudur iyo waxyeelo cayayaan ah.
Bloom caddaan ah caleemaha waxay tilmaami kartaa caarada budada. Xaaladdan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caleemaha waxyeelada leh iyo geedi socodka fungicide. Marar badan qolka u habee. Begonia ma jecla qolka qasan.
Haddii caleemaha ay xirtaan xinjiro oo ay u dhegaan gacmaha, ubaxa wuxuu waxyeeleeyaa aphid. Laga soo bilaabo iyada si fiican u caawisaa processing faleebo of celandine ama decoction basasha.
Shabakad ciriiri ah ayaa muujinaysa guuldarada caarada caarada. Wuxuu badanaaba ku yaalaa guri dabaq leh qalalan. Geli nuujiyaha iyo qolka badanaa sii wad. Kala wareeji warshadda leh waraaq qoyan. Waxaad ku qoyi kartaa kubad suuf ah xalka saabuunta iyo si taxadar leh u soo ururi rugweb. Haddii ay dhacdo dhaawac daran, daaweynta cayayaanka ayaa loo baahan yahay.
Warshadu waxay waxyeellayn kartaa caaryada cawliga (gaar ahaan marka lagu koriyo koriyo, lagu koriyo). Heerkulka sare leh qoyaan badan - jawi wanaagsan oo loogu talagalay dhacdadeeda. on dushooda caleemaha, ubaxa iyo caleemaha waxaa la aasaasay dhir nacas cad oo leh ubaxyada grayish. Dhawaan waxay u leexiyaan qallayl brown. Cawska oo caleemo, caleemaha cagaaran iyo madow. Nidaamka halganka - buufinta 1% dareeraha Bordeaux.
Haddii caleemaha of begonia bilaabay inay curl, caleemaha jir ah u dhiman karaan. Tani waa nidaam jireed oo caadi ah.
Haddii caleemaha cagaaran iyo madow, begonias la'aanta nafaqooyinka.
Caleemaha cirka iyo madow - natiijada xiriirka biyaha ama hawo qallalan oo qolka. Ubaxa wuxuu sidoo kale bilaabi karaa in uu dhaco haddii biyo ay ku dhacdo inta lagu jiro waraabinta.
Begonias Terry doorbiday by growers badan. Waxay soo jiidataa dareenka muuqaalka qurxinta iyo soo jiidashada ubax dheer. Haddii aad go'aansato inaad ku korto guriga, hubi inaad akhrido tilmaamaha aasaasiga ah ee daryeelka. Begonia - dareenka ubaxa, dalbashada dareen iyo daryeel. Laakiin, shaqo ayaa la abaalmarin doonaa! Haddii aad siiso daryeelkaaga, wakhti dheer ayay kugu farxi doontaa oo qurxin doontaa gurigaaga!
Hoos waxaa ku qoran sawir aad ku aragtid sawir gurigaaga ah oo ah geedka ubaxa ah ee Begonia: